China 3.2m Calandra Roller Heat Press Machine fekitori uye vanotengesa | Asiaprint
Schematic Dhizaini Yemuchina
1. Rack Dhiraivha: Deredza fume mukati mechassis, yakareba nguva yebasa.
2. Otomatiki Kuchekesa: Inogona kugadziriswa otomatiki kudzivirira gumbeze kufamba kubva kuchikanganisa kudhinda maitiro.
3. Yakavakirwa-MuOiri Tangi: Inobatsira kuchengetedza nzvimbo uye kudzikisa mutengo, ichagadziriswa otomatiki kuti ishandise zvakare.
4. Yakaparadzaniswa Mudziyo: otomatiki akanzwa kumira anogona kupatsanura iyo yakanzwa pakarepo otomatiki mune emergency mamiriro, ipa dziviriro kugumbeze uye iwedzere hupenyu hwayo hwekushandisa
5.Kudzvinyirira Chishandiso: Pressure inogadziriswa uye kumanikidza kwekuchinjisa kunogona kunyatso kudzorwa.
6. Chinyorwa Choparadzanisa Chishandiso: Kana magetsi akachekwa, wedzera chengetedzo uye nyore dhizaini yemanyorero akanzwa anodzosera mudziyo kuchengetedza hupenyu hwebasa hwemagumbeze.
7.Mhepo Shaft: Yekuunganidza yakashandiswa sublimation pepa, inogona kuchengetedza nguva uye nesimba
Bata Screen Screen: Yakanyatso kudzora tembiricha uye nguva.Iyo humanization dhizaini uye nyore kushandisa.
"U" chimiro chishandiso: chemachira akapfava anodyisa kudyisa, inogona kuita kuti kudhindisa kuve kwakafanana uye kuchengetedza kwevashandi
Exhaust Sisitimu: Gadzirisa utsi uye gasi inogadzirwa mukuchinjisa kudhinda maitiro, Shanda zvakanyanya.
Mucheka Rewind Chishandiso: YeKutora yakapera jira mushure mekuchinjisa kudhinda.
"V" Shelving Unit: Iyo roller yeiyo yakashandiswa sublimation bepa pane yekuchengetedza shefu kuti ibvise iyo.Iinogona kusevha zvakanyanya inorema kushanda uye rega mushandi aite nyore.
Chiedza cheAlarm: Kana gumbeze rakabudirira kupinda, Rinoita ruzha sechiyeuchidzo.
Pasuru Uye masevhisi
1.Muchina wedu wese unenge wakazara zvakanaka nefuro rabha kutanga, ipapo vanozoiswa mukatoni kesi ine chiratidzo chekutumira pamusoro.
2. tinofanira kuedza nepatinogona napo kuti tione kuti michina yose ichaendeswa kwauri pasina kukuvara.
3. Chero matambudziko akaitika apo kutakura kune basa kwatiri.
4. Hupenyu-hurefu pa-line rutsigiro rwehunyanzvi.
5. Ipa zvikamu zvemahara kana matambudziko achiitika mukati megore rimwe.
Pashure: Akangwara Kudzora Jersey Calandra Roll Heat Press Machine
Zvadaro: Rolll Kutenderera Karenda Heat Press Machine
Dhijitari Collar Hot Fusing Press Machine
Digital 3D Mucheka Leather Four Station Embossin ...
16 × 24 T-hembe Sublimation Heat Kutamisa Press M ...